Weerarkii lagu qaaday masaajidka Minnesota mid argagixiso ayuu ahaa - BBC Somali
Qarax burburiyey daaqadaha iyo qol ku dhex yaalla masaajid ay muslimiintu ku leeyihiin gobolka Minnesota ayuu barasaabka gobolka, Mark Dayton, sheegay inuu ahaa fal-dambiyeed argagixiso.
FBI-da ayaa baaraysa wax uu Dayton ku sheegay fal "daran, oo ceeb iyo fulaynimo ah".
Waxay sheegeen in qaraxa uu ka dhashay waxyaabo la isku xirxiray. Ma jirto cid wax ku noqotay, hase yeeshee xafiiskii iimaamka ayey waxyeello soo gaartay.
Qiyaastii ilaa 20 qof ayaa gudaha ku jiray markii uu qaraxu dhacay.
Wuxuu intaa ku daray in "nacaybku uu noqday wax bulshadeenna ku baahaya" loona baahan yahay in looga hortago "jacayl iyo qiyamka aan leennahay".
Image caption Dad taageero u muujinaya masaajidka ayaa ubaxyo dhigay xarunta Islaamka ee Minnesota.
Golaha xiriirka islaamka iyo Ameerikaanka (CAIR) ayaa ku yaboohay in $10,000 la siinayo ciddii keenta akhbaar lagu soo xiri karo qofkii weerarka mas'uulka ka ahaa. Sidoo kale waxaa abaalmarintaas oo kale ballan qaaday ururka muslimiinta Maraykanka ee Minnesota.
Bog internetka laga furay oo lagu uruurinayo qaaraan lagu dayactirayo masaajidka ayaa durba lagu uruuriyey ilaa Isniintii $40,000.
Minnesota waa halka ay deggan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool Maraykanka, xarunta islaamiga ee Daarul Faaruuqna waxay inta badan u khidmaysaa Soomaalida.
Maamulayaasha Minnesota waxay sheegeen in 14 kiis oo ka dhan ah muslimiinta ay dheceen Maraykanka sannadkii 2016, sida uu qoray wargayska The Star Tribune.